<?xml encoding="UTF-8">Daily latest information 🤑😇😊 Somali - BBC News Somali
Fannaanka caanka ah ee Soomaaliyeed, Cumar Cismaan Macaane oo loo yaqaan Cumar Shoolli, ayaa walaac ka muujiyay in dalkii uu inta badan noloshiisa ku soo qaatay, carruur badanna uu ku dhalay laga tarxiilo.
Fannaanka caanka ah ee darbi jiifka ahaan jiray
Maxay sameeyeen jaajuusiinta hordhaca u ahaa booqashada Joe Biden ee la tarxiilay?
Raggan ka tirsan sirdoonka ayaa ku lug yeeshay dhacdo ka baxsan shaqadooda xilli uu Madaxweyne Biden isu diyaarinayay inuu booqasho ku tago Kuuriyada Koonfureed.
BBC-da oo daabacday warbixin ay dowladda UK diidanayd in la faafiyo
Dowladda Ingiriiska ayaa isku dayday in ay hor istaagto daabicidda maqaalkan.
TOOS Waa kuma ninka ay dartiis u kulmi rabaan Biden iyo Maxamed Bin Salmaan oo isku dhacsan?
Sidee looga jawaabay hadalkii ka soo fakaday Bush ee ku saabsanaa Ciraaq?
Madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka George W. Bush ayaa wajahaya dhaleecayn ballaaran kaddib markii uu si aan ku talogal ahayn Vladimir Putin ugu cambaareeyay weerarka lagu qaaday "Ciraaq", isagoo markii dambe hadalkiisa saxay oo sheegay inuu ula jeedo Ukraine.
Wajiyada haweenka ayaa waxaa laga mamnuucay inay ka soo muuqdaan taleefishinnada xilli kooxaha xukuma Afgaanistaan ay sii adkaynayaan xayiraadaha ay soo rogayaan.
20 Maajo 2022
Faahfaahin ka soo baxaysa Khasaaro ka dhashay dab ka kacay suuq ku yaalla Muqdisho
Waxaa lagu guuleystay in la damiyo dab xalay ka kacay suuq ku yaalo isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. dabka oo kacay abaaro sideedi fiidnimo ayaa soo gaaray ilaa saqdii dhaxe ee xaley.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Antony Blinken, ayaa ka codsaday dalalka Qaramada Midoobay inay cadaadis ku saaraan Ruushka inuu joojiyo in cuntada uu adeegsado sida hubka oo kale.
Haweeneyda ninkeeda waxaa lagu dilay xaafad ku taalla waqooyiga-bari ee Ukraine.
19 Maajo 2022
Dood ka dhalatay sheekh ka hadlay in eyga iyo doofaarka ay daahir yihiin
Maxay yihiin maxaabiista dagaal, sidayse tahay in loola dhaqmo?
Muuqaal, Daawo: Waayeelka ‘kitaabbada xooray’ si uu caan uga noqdo Tiktok, Muddada 2,52
Sababta ay dad badan u daawadaan muuqaalladiisa waa inuu baedelay hab-dhaqankiisa. Beddelkii wacdiga iyo xadrada wuxuu hadda sameeyaa muuqaallo madaddaallo iyo qoob-ka-cayaar ah.
5 Maajo 2022
Maxaa sababay in Canada ay dalkeeda ka tarxiisho dad Soomaali ah?
Waxaa soo badanayaa tirada Soomalida dowladda Canada sheegtay inay dalkeeda ka masaafurinayso sababo la xiriira xagga sharciga.
27 Maarso 2022
Muuqaal, Daawo: Meheradaha cuntada iyo dhalinyarada Baraha bulshada, Muddada 1,49
Daawo: Meheradaha cuntada iyo dhalinyarada Baraha bulshada
1 Maarso 2022
Dhageyso, Dhageyso: Fannaanka caanka baxay ee mar darbi jiifka noqday, Muddada 6,52
Hobolka Caan baxay ee Cabdiraxmaan Cabdillaahi Nuune, oo loo garan ogyahay (Iidle yare) ayaa sheegay inuu nolosha ka soo billaabay hoos, isagoo ku soo barbaaray Degmada Madiina ee gobolka Banaadir.
3 Febraayo 2022
DAAWO : Muxuu Wasiir Bidhaan kaga duwanyahay mas’uuliyiinta Federaalka ee ku hungoobay Puntland?
Mar la weeydiiyay warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cusmaan Karaash uu culees siyaasadeed dul dhigay kursiga Bidhaan, ayuu Bidhaan sheegay in arrinkaasi aysan waxbo ka jirin.
22 Jannaayo 2022
Daawo: Boqor Buurmadow oo BBC-da uga warramay safarkiisa Muqdisho iyo Baydhabo
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, wuxuu ka sheekeeyay heesaha uu jecel yahay iyo ruwaayadaha.
Dhageyso, Wararka ugu dambeeyey ciyaaraha Koobka Afrika ee ka socda Cameroon, Muddada 2,55
Wararka ugu dambeeyey ciyaaraha Koobka Afrika ee ka socda Cameroon
10 Jannaayo 2022
Wasiirka Puntland: Xilka waa inuu xwareejiyaa taliyaha PSF
Fannaanadda Nimco Happy waxay ka hadashay heesteeda caanbaxday iyo sida ay dareentay markii ay aragtay.
Wararka doorashada Soomaaliya 2022
Waa tuma gabadha gilgilaysa kursiga HOP097 ee Khadiija Diiriye ay ku fadhido?
Kursigan ayaa ka mid kuraasta loollanka adag ka dhici doono doorashada Aqalka Hoose ee Soomaaliya.
10 Nofembar 2021
Natiijada ciyaar taariikhi ah oo haweeney ku dirtay shacabka iyo dowladda waddankeeda
Ka warrant haddii aad xabsi ku gashid dabaaldagga ciyaar aad daawaneysay oo kooxdaadii aad taageereysay ay ku guuleysatay?
3 Nofembar 2021
Maxay qaar ka mid ah taageerayaasha Newcastle u xirtaan khamiisyada iyo cimaamadaha?
Qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Magpies-ka ayaa soo xirtay dharka Carabta mar ay isugu soo baxeen afaafka hore ee garoonka St James' Park si ay ugu dabaaldagaan iibsashada kooxdaasi.
Waxaa jira waxyaabo ka dhaca garoonka gaar ahaan cayaarta kubadda cagta, micno ma sameyneyso inta jeer ee ay dhacdo, balse waa wax qosol leh. Waxay beddelaan natiijada cayaarta, waxayna saameeyaan natiijada guud.
Taxanaha 100-ka haween ee BBC: Yaa ku jira diwaanka Sanadkan?
Waxaan idiin soo gudbineynaa haweenka saameynta leh ee sanadkan 2021 iyo sida ay isbeddello uga sameynayaan dunida.
7 Disembar 2021
Waa Sidee Nolosha Qofka Bilaa Walaalka ahi?
'MADINNIMO': Waa Sidee Nolosha Qofka Bilaa Walaalka ahi?
2 Disembar 2021
Sababta magaalada Berbera u heshay abaalmarinta qaaliga ah
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan dhallaanka ee UNICEF, ayaa ku dhawaaqday in magaalada Berbera ee jamhuuriyadda goonni isutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland, ay ku guulaysatay abaalmarainta maamulka magaalooyinka carruurta u fiican.
Taariikhda isdilkii ugu tirada badnaa ee 900 oo qof ay hal mar is dileen
Soo jiidashada Jones, ayaa aheyd hadaladiisa akhriska maskaxda iyo bogsiinta nafta.
Adduunka sidee ayuu noqon lahaa haddii carruurta maamulka loo dhiibo?
Dunidu sidee bay ahaan lahayd haddii ay maamulaan dhalinyaradu? Hal shirkad ayaa go'aansatay inay ogaato.
Maxay tahay 'Diinta Cusub' ee uu mamnuucay Imaamka Al-Azhar?
Maxay tahay 'Diinta Cusub' uu mamnuucay Imaam Axmed Al-Tayib? Muxuuna yahay calaaqaadka Israa'iil iyo Imaaraadka kala dhaxeeya?
Muxuu sameeyay hal nin oo keligiis militariga Pakistan uga adkaaday goob dagaal?
Hindiya waxaa si weyn looga xusaa askari la sheego inuu wacdaro ka muujiyay dagaal ka dhacay xaafadda Gangasagar, kaasoo uu keligiis ku wajahay cutubyo ka tirsan militariga Pakistan, xilligii uu socday dagaalkii labada dal dhex maray 1971-kii.
15 Nofembar 2021
Dagaalkii Afar-biloodka: "Qoriga dhabarka la iga saaray balse badbaadada ii noqday"
Eng. Maxamuud Jimcaale, oo qisadan ay ku dhacday xilligii uu socday dagaalkii Afar-biloodka ayaa qoray warbixintan.
9 Nofembar 2021
Wax ka ogow sida gabar ku nool Hindiya ay 14 bilood ugu qortay Kitaab Qur’aan ah oo qurux badan
Shaqada ay qabatay gadhaas 14-ka bilood qoraysay Kitaabka Qur'aanka ah ayaa waxaa amaanay dad badan, halka iyaduna ay ka sheekaysay sida ay ugu suuragashay inay kitaabkaas ku qorto.
Dhagixii cirka kasoo dhacay ee magaalo dhan burburiyay
Dadku waxay isaga mashquulsanaayeen nolol maalmeedkooda iyagoo aan ka warqabin inay kusoo socoto musiibo qarax folkaano ah oo ku xawaareyneysay ku dhawaad 60,000 oo meyl saacaddiiba.
31 Oktoobar 2021
Maxay tahay cabsida ku saabsan ‘Moos Soomaaliya laga dhoofiyay’ ee caalamka qabsatay?
Dhowr isbuuc gudahood waddankii afaraad ayaa laga soo tabiyay saameynta sheeko ku saabsan Moos dixiri leh oo la sheegay in laga dhoofiyay Soomaaliya.
Dhaqaalaha Soomaaliya: Shan qodob oo ku xusan warbixinta baarista maaliyadeed ee Hanti-dhowrka
Xafiiska hanti dhawraha guud ee Soomaaliya Maxamed Cali Afgooye ayaa soo saaray warbixinta baarista maaliyadeed iyo u hoggaansamidda dhanka sharciga.
21 Nofembar 2021
Sida Soomaalida ay kuulaha uga sameeyaan lafaha geela
Muddo sanado ah, wuxuu shaqadiisa lafaha si qarsoodi ah uga shaqeynayay guriga, ka dibna wuxuu si qarsoodi ah ugu iib geeyaynayay suuqyada.
13 Nofembar 2021
Maxaa ka jira in moos cudur wata oo Soomaaliya laga qaaday la geeyay Koonfur Afrika?
Muuqaal uu ku lammaanaa qoraal ayaa si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ee dalka Koonfur Afrika, kaas oo ku saabsan moos laga keenay Soomaaliya.
Maxay Kenya u xaraashaysaa diyaaradahan ay Soomaaliya lahayd?
Waaxda Garoomada Kenya ayaa ku dhawaaqday inay xaraashi doonto 73 diyaaradood oo duug ah oo in muddo ah meel iska yaallay, kuwaas oo ay ku jiraan labo ka mid ah diyaaradihii Ciidamada Cirka Soomaaliya ah.
4 Nofembar 2021
Xabagta Soomaaliya laga helo ee dahabka u ah Spain
Gobollada Segovia, Ávila iyo Valladolid ee Spain waxaa yaalla hanti daahsoon.
3 nooc oo raashin ah oo caafimaadkaaga aad sare ugu qaadaya
Qof walba wuu jecel yahay caafimaad dhammeystiran oo uu ku noolaado. Kuwani waa cuntooyin ugu caafimaadka fiican.
4 Abriil 2022
Maxaa ka jira in Covid-19 uu saameeyo ragannimada?
Haatan labo sano ayaa laga joogaa tan iyo markii fayraska Covid laga helay dunida mar dambena lagu dhawaaqay inuu yahay xanuun safmar ah, balse haatan unbaa laga war helay saameynta uu ku leeyahay ragannimada.
Maxay tahay cirbadda HIV AIDS ee uu ansixiyay Mareykanka?
Si ka duwan daawaynta hadda jirta, ee u baahan dadka inay kaniini qaataan maalin kasta, cabotegravir waa la isku duraa waxaana la bixiyaa labadii biloodba mar.
29 Disembar 2021
65 jirka kow iyo toban-ka jeer qaatay tallaalka Covid-19 ee mahadinaya
65-jirka reer tuulada ah ayaa la tallaalay siddeed jeer sannadkii hore, sida ay saraakiishu sheegeen hase yeeshee wuxuu isaga ku andacoonayaa inuu qaatay 11 tallaal.
7 Jannaayo 2022
Haweeney si mucjiso ah uga bogsatay cudurka HIV
Unugyada difaaca ee bukaanka ayaa u muuqda inay baabi'iyeen fayraska iyadoo aan loo adeegsanin wax daawo ah.
Ma taqaan afarta nooc ee uu u qaybsamo cayilku?
Baadhis la sameeyey ayaa daaha ka feyday noocyadan cayilka ee jira.
'Marka uu codka iga lumay ayaan ogaaday inuu kaansarka naasaha i haleelay'
Hooyadan Edinburg ku nool oo haysata laba carruur ah, codka marka uu ka lumay waxay moodeysay iney dhuunta wax ka qabto balse waxaa loo sheegay wax aysan filaneyn.
Iska ilaali cuntooyinka haddii aad qabto cudurka macaanka
Tirada dadka qaba macaanka guud ahaan dunida waxa lagu qiyaasaa 422 milyan oo qof, waxase xaqiiqo ah in xitaa caruurta uu ku dhaco cudurkani.
Waa maxay xanuunka macaanka sidee ayaadna uga hortagi kartaa?
Qiyaastii 422 milyan oo qof ayaa la nool xanuunka macaanka, waana ku dhowaad afar jeer intii ay ahaayeen sanadkii 1980. Maalinta Sokorta Adduunka, halkan waxaan idinkugu gudbineynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xanuunkan, iyo sida aad uga hortagi karto.
Maxaad ka taqaanaa khataraha caafimaad ee la xiriira dhirirka iyo gaabnida qofka?
Wuxuu isbaddal xooggan ku yimid joogga banii'aadanka ee maanta marka lo barbardhigo dadkii hore, celcelis ahaan, haatan waxa kor u kacay jooga dadka adduunka marka la firiyo 100 sano oo lasoo dhaafay, waxyaabaha ka qeyb qaatay arrintani waxaa kamid ah in isbaddal uu ku yimid nolosha banii'aadanka.
Maxaa YouTube looga saaray khudbooyinka Sheekhan dhintay?
Cinwaanka oo ay ku xirnaayeen 2.9 milyan oo qof ayaa waxaa la sheegay inay ku jiraan muxaadarooyin Yuhuud naceyb ah.
5 Abriil 2022
Hay'adda dambi baarista federaalka Mareykanka ee FBI-da ayaa sheegtay in "khatar badan ay ka dhalankarto" adeeggada FaceApp iyo kuwa kale ee noociisa ahba.
30 Disembar 2021
Wax ka ogoow toddobo arrimood ku saabsan qorraxda
Dadku intooda badan marka ay cirka fiiriyaan waxa ugu horreya oo indhahooda ku soo dhacaya waa qorraxda, balse xogo yaab leh oo qooraxxda la xiriira oo ka qarsoon ayaa jira.
24 Jannaayo 2022
Netlicks? 'Shaashadda aad wax ka dhadhamin karto’
Shaashadda TV-ga ee "la leefi karo" taas oo ay tahay in ku soo gaadhsiiso dhadhanka cuntada ayaa uu sameeyay borofesar u dhashay Japan.
24 Disembar 2021
Sagaal arrimood oo haddi lagu xadgudbo dunida baaba' u horseedaya
Qarniyadii u dambeeyey dunida waxaa ka dhacay waxyaabo aan la maleysan karin ama horay aan loo saadaalin.
Diyaaradda ugu xawaaraha dheereysa ee korontada ku shaqeyneysa
Diyaaraddan korontada ku shaqeysa waxay awood u leedahay saacaddi iney socoto xawaare dhan 623 km.
Meydka gabadhii 'fircoon' oo la helay
Waxaa la helay qabri la sheegay in lagu aasay gabadhii Fircoon 3,700 sano ka hor, waxaana la rumeysan yahay in haraaga uu yahay gabdhii Fircoon kaas oo laga helay ahraamta Masar.
Layli: Ka jawaab su'aalahan ku saabsan isbedelka cimilada
Aqoon intee la eg baad u leedahay sida aad qeybta uga noqon karto yareynta wasaqda keenta isbedelka cimilada?
Ninka dunida ka badbaadiyay "halista" dagaal culus
Soddon sana ka hor oo ay taariikhdu ku beegneyd 26-kii September, 1983, dunida waxay ka badaadday dagaal la iisu adeegsado hubka Niyuukilarka.
Sannad ka dib markii noole ay seynisyahannada moodayeen in la waayay oo Soomaaliya laga helo
Noole dooli la'eg balse maroodiga ay isku isir yihiin ayaa dalka Jabuuti laga heley.
12 Nofembar 2021
Listen Next, Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 21 Maajo 2022, Muddada 29,00
Dhageyso, Dunida Iyo Maanta, 16:59, 20 Maajo 2022, Muddada 1,00,00
Dhageyso, Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 20 Maajo 2022, Muddada 30,30
Dhageyso, Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 20 Maajo 2022, Muddada 29,00
Wadaadka ayaa ku doodaya in xafladaha dhalasha ay la mid yihiin uun kuwa kale ee loogu dabaal dego horumarka, sida sanad guurada, qalin jebinta iyo guusha shaqada.
Mas'uul sare oo ka tirsan gaashaandhigga Maraykanka ayaa Jimcihii laga soo xigtay in markabkii Ruushka ee Moskva uu ku dhacay gantaal ah nooca loo yaqaan Neptune.
Oday Muuse Caddood Saalax oo dagaalkii Saax-meygaag iyo Sangeyjabiye seddex qof oo eheladiisa ah looga dilay ayaa sheegay inuu dhexda u xirtay nabadeynta labada beelood ee walaalaha.
Qolalka kirada ah ayaa loogu talagalay in lagu hayo dembiilayaasha la xukumay ee ka yimid wadamada aan ka tirsanayn Midowga Yurub.
Maxaa dhacaya haddii Ruushku ku guuldareysto inuu helo dammaanadda amniga ee uu dalbanayo?
Hoggaanka ciidamada PSF ee Puntland ayaa sharcidarro ku tilmaamay xil-ka-qaadis dhawaan lagu sameeyay agaasimaha hay'adda maasmusho ciidamadaasi, waxaana ay madaxda maamulka Puntland ku eedeeyeen in ay doonayaan in ciidamada kala duwan ee maamulkaasi islaayaan.
Nimco Happy oo wareysi siisay BBC--da ayaa sheegtay in Abwaan Cadirashiid Caaqilka uu erayada heesta leeyahay ayna sannadkii 2017-kii qaadday iyadoo ay Ciid soo galeyso.
Maxamed waxaa safarka ku weyliya qoyskiisa oo ka kooban lix carruur ah iyo xaaskiisa. Waxa uu sheegay inuu go'aanku gaaray ka dib markii uu xaqiiqsaday in dalka Denmark uu yahay dal laga rabin Muslimiinta.
Xasan Ganey wuxuu ahaa qof curriya heesaha, ruwaayadaha iyo maansooyiinka, wuxuuna sidoo kale ahaa jilaa qeyb wayn ka ahaa ruwaayadaha.
Albumka sawirrada, Sawirro: Sida looga ciiday dunida Muslimka
Sawirrada sida dunida Muslimka looga ciiday
2 Maajo 2022
Sawirro aan caadi ahayn oo uu soo qaaday gantaalkii ay K/ waqooyi gantay
Sawirradan aan caadiga ahayn waxaa la sheegay inuu qaaday gantaalkii ugu casrisanaa oo ay K/waqooyi riddo muddo shan sano ah
1 Febraayo 2022
Daawo: Sawirradii ugu dambeeyay ee colaadda dalka Ukraine
Dad badan ayaa ka qaxaya magaalada Irpin oo ku taal meel u dhow caasimadda Kyiv, xilli ciidamada Ruushku ay duqeynayaan xaafadaha ay deggan yihiin dadka rayidka ahi.
6 Maarso 2022
Sawirro: Ruushka oo markii ugu horreysay soo bandhigay shaqaalaha markabkii dagaalka ee quusay
Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa daabacday sawirro muujinaya waxa ay ku sheegtay in ay yihiin shaqaalaha markabkii dagaal ee Moskva ee quusay.
17 Abriil 2022